Faa'iidooyinka tamarta qoraxda: waa maxay, noocyada iyo faa'iido darrooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Faa’iidooyinka tamarta qoraxda
Jarmal Portillo | | Tamarta Qoraxda Photovoltaic
Waan ognahay in bina aadamku ku kobcayo tamarta la cusboonaysiin karo isagoo ku boodaya xuduudaha. Iyagu waa kuwa aan wasakheynin deegaanka una oggolaanaya inay helaan ilo tamar aan xad lahayn. Tamarta la cusboonaysiin karo waxaa ka mid ah, tamarta qorraxda waxay heshay muhiimad weyn tobannaankii sano ee la soo dhaafay iyo joogitaanka sii kordhaya ee adduunka oo idil. Waana badan yihiin faa'iidooyinka tamarta qoraxda iyadoo la tixgelinayo noocyada kale ee dib-u-cusboonaysiinta.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa faa iidooyinka tamarta qoraxda iyo sida ay muhiim ugu tahay mustaqbalka tamarta.
1 Waa maxay tamarta qoraxda
1.1 Tamarta korantada
1.2 Tamarta Photothermal
1.3 Tamarta Qoraxda Photovoltaic
2 Faa’iidooyinka tamarta qoraxda
Waa maxay tamarta qoraxda
Si loo ogaado faa'iidooyinka tamarta qorraxda, waa inaan ogaanno waxay tahay iyo noocyada tamarta qorraxda ee jira. Marka hore in la ogaado waxa ay tahay il tamar dib loo cusboonaysiin karo oo laga helo qoraxda iyo kuleylka iyo korontada lagu soo saari karo nooc kasta oo adeegsi ah. In kasta oo ay tahay il waara, haddana waxaa muhiim ah in la tilmaamo in aysan iyadu dib-u-dhac la’aanteed ka ahayn, waxay sidoo kale saameyn ku yeelaneysaa baaxadda iyo adeegsiga.
Waxay si toos ah uga soo baxdaa shucaaca ka gaadha meerahayaga qorraxda ha ahaato qaab iftiin ah, kuleyl ama shucaac ultraviolet ah. Waxay kuxirantahay sida tamarta qoraxda ay tahay, noocyo kaladuwan ayaa jira.
Sida magaceedaba ka muuqata, waa nooc tamar la cusboonaysiin karo oo nadiif ah oo ka kooban ka faa'iideysiga tamarta qorraxda si ay u dhaliso koronto. Si ka duwan baalayaasha qoraxda ee loo isticmaalo tamarta sawir-qaadista si looga dhaliyo koronto fotonnada iftiinka laga helo shucaaca qorraxda, tamartaan ayaa ka faa'iideysanaya shucaacan inuu kululeeyo dheecaan.
Marka falaadhaha qorraxdu ku dhacaan dareeraha, way kululaanaysaa oo dheecaankan kulul waxaa loo isticmaali karaa adeegsiyo kala duwan. Si aad u hesho fikrad fiican, 20% isticmaalka tamarta ee isbitaal, hoteel ama guri wuxuu u dhigmaa isticmaalka biyaha kulul. Tamarta kuleylka kuleylka waxaan ku kululeyn karnaa tamarta qorraxda waana ka faa'iideysan karnaa sidaa darteed, qeybtaan tamarta, uma baahnin inaan isticmaalno haraaga ama tamar kale.
Tamarta kuleylka kuleylka ah waxay si weyn uga qeyb qaadataa yareynta qarashaadka, iyadoo ay ugu wacan tahay keydinta tamarta iyo dhimista qiiqa CO2 ee sababa kuleylka adduunka iyo kicinta isbeddelka cimilada.
Waxay isticmaashaa kuleylka iyada oo ay ugu mahadcelineyso ururiyaasha qoraxda ee hela falaaraha qorraxda una wareejiya dareeraha shaqeeya. Waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo dhismayaasha iyo biyaha, lagu wareejiyo marawaxadaha, hadhuudhka qallalan, ama lagu dumiyo qashinka.
Si loo soo saaro tamarta sawir-qaadista, waxaa lagama maarmaan ah in la soo qabto fotonnada iftiinka ee shucaaca qoraxda leh loona beddelo koronto si loo isticmaalo. Tan waxaa lagu gaari karaa habka beddelka sawir-qaadista iyada oo loo marayo isticmaalka qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda.
Qalabka qoraxda wuxuu u yahay cunsur muhiim ah unuga sawirka. Kani waa qalab semiconductor ah (oo laga sameeyay silikoon, tusaale ahaan) oo aan u baahnayn qaybo dhaqaaqa, shidaal, ama buuq dhalin.
Marka unuggan sawir-qaadeyaasha ahi si isdaba-joog ah u soo gaadho iftiinka, wuxuu nuugaa tamarta ku jirta sawir-gacmeedka iftiinka waxayna caawisaa abuurista tamar, dejinta dhaqdhaqaaqa elektaroonigyada ku xanniban korantada gudaha. Markay taasi dhacdo, elektaroonikada laga soo ururiyay dusha sare ee unugyada sawir-qaadaha waxay soo saaraan koronto joogto ah.
Markii aan ogaanno waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee tamarta qorraxda, waxaan arki doonnaa maxay yihiin faa'iidooyinka isticmaalka tamarta noocan ah:
Waa tamar gebi ahaanba nadiif ah taas waxay kaa caawineysaa yareynta raadadka kaarboonkaaga si weyn. Ku mahadsanid isticmaalkeeda waxaan ka fogaaneynaa jiilka gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo ma nijaasaynno inta ay jiil yihiin ama inta ay isticmaalayaan. Waxaa jira kaliya wasakhda wasakhda yar marka la abuurayo baalayaasha ku shaqeeya cadceedda.
Waa il tamar dib loo cusboonaysiin karo oo waari kara muddo kadib.
Si ka duwan tamarta kale ee dib loo cusboonaysiin karo, Tamartaani wax bay kululeyn kartaa.
Uma baahna nooc ka mid ah soo saarista joogtada ah ee qalabka si ay u shaqeyso. Tani waxay ka dhigeysaa awood aan qaali ahayn oo maalgashadeeda bilowgeedu ay fududahay soo kabashada sanadihii la soo dhaafay. Waa run in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee tamarta la cusboonaysiin karo ay haysatay tan iyo markii la aasaasay ay ahayd maalgashiga bilowga ah iyo heerka soo noqoshada, in kasta oo ay taasi hadda ka sii ahayn iyada oo ay ugu wacan tahay horumarka tikniyoolajiyadda. Qalabka qoraxda wuxuu si fiican u yeelan karaa nolol waxtar leh 40 sano.
Iftiinka qoraxda waa mid aad u tiro badan lana heli karo marka isticmaalka baalayaasha cadceedda waa ikhtiyaar la adeegsan karo. Ku dhowaad meel kasta juquraafi ahaan meeraha ayaa isticmaali kara tamarta qorraxda. Waxaa muhiim ah in la ogaado in mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee tamarta qoraxda ay tahay inuusan u baahnayn fiilooyin. Tani waxay ka caawineysaa rakibidda meelaha ay adag tahay in lagu rakibo fiilooyinka noocaas ah.
Faa'iidada kale ee tamarta qoraxda waa taa waxay yareysaa baahida loo qabo in la isticmaalo shidaalka sidaa darteed waxay ka caawineysaa dhowrista kheyraadka dabiiciga iyo yareynta wasakheynta deegaanka.
Sida ay faa iidooyin u leeyihiin korantada qoraxda, sidoo kale waxaan leenahay xoogaa faa'iido daro ah. Aan aragno waxa ay yihiin:
Waxay leedahay waxtarka yar marka tamarta qoraxda loo badalayo tamarta korantada. Waxtarkani waa qiyaastii 25%. Horumarinta farsamada waxay xooga saareysaa kordhinta waxtarkan.
Inkasta oo mustaqbalka fog ay noqon karto wax laga xumaado, kharashka bilowga ahi waa badan yahay mana ahan mid ay heli karaan qof walba.
Waxay lagama maarmaan u tahay meel lagu rakibo weyn si loo awoodo in la soo saaro wax badan koronto. Waa in lagu xisaabtamo in haddii baahida tamarta ay ka weyn tahay, ay adag tahay in la rakibo baallayaasha ku shaqeeya cadceedda iyadoo loo haysto boos la’aan.
Waa nooc tamar ah oo aan joogto ahayn. Wuu isbedbeddelayaa maalintii oo dhan oo lama heli karo habeenkii. Maalintii oo dhan way isbedelaysaa qaddarka iftiinka qoraxda ee ay hesho awgeed.
Waxqabadka xayndaabyada ayaa hoos u dhacaya xaaladaha cimilada qaarkood ha ahaato waqti dheer oo kuleyl iyo qoyaan ama daruuro iyo ceeryaamo.
Wasakhaynta ayaa sidoo kale dhibaato ku ah tamarta qoraxda. Waana magaalooyinka magaalooyinka haysta heerarka sare ee wasakheynta jawiga waxqabadka aad ayuu uga hooseeyaa.
Intii lagu gudajiray soo saarida qoraxda tiro badan oo gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ah ayaa la sii daayaa iyo qashinka sunta ah. Tani waa cillad-darro dib loo dheellitiri karo inta lagu jiro isticmaalka maadaama ay gacan ka geysaneyso in si weyn loo yareeyo raadadka kaarboonka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto faa'iidooyinka tamarta qorraxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Faa’iidooyinka tamarta qoraxda
Haraaga qatarta ah